प्रकार को मान्छे तपाईं पूरा हुनेछ स्कूल मा (र तिनीहरूलाई कसरी सामना गर्न) - भारतीय युवा
प्रकार को मान्छे तपाईं पूरा हुनेछ स्कूल मा (र तिनीहरूलाई कसरी सामना गर्न) — भारतीय युवा
आफ्नो विद्यालय अर्को संसारमा छ पूर्णरुपले. यो सबैभन्दा अनुपम ठाउँ जहाँ तपाईं मुठभेड सबै प्रकारका मान्छे र आशा प्राप्त गर्न पर्याप्त अनुभव. जो कुनै कुरा तपाईं स्कूल मा हो, तपाईं बाध्य छन् पूरा गर्न सबैभन्दा रंगीन व्यक्तित्व कि जोड गर्न आफ्नो दैनिक खुराक को काम या मजा । यहाँ एक संक्षिप्त छवटा सबैभन्दा प्रमुख र स्थायी प्रकार को मान्छे तपाईं निश्चित हुनेछ पूरा, र कसरी तपाईं संग सम्झौता गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई — यो स्वीकार । हामी सबै छ कि एक मान्छे मा हाम्रो वर्ग जो थाह सबैलाई र सबै (कहिलेकाहीं, पनि ती कुराहरू अवस्थित छैन). उहाँले एक सतत अभिव्यक्ति मा आफ्नो अनुहार भने जस्तै, उहाँले विश्वास छ कि उहाँले परे तुच्छ कुराहरू हामी (अन्य कमसल नश्वर) हुन सक्छ पाऱ्यो । उहाँले बताउन सबैभन्दा अपमानजनक बारेमा उपाख्यानों आफ्नो उहाँले हुन सक्छ मुक्ति मा बसोबास सिरिया, अरू कसैले गरौं जीत दौड, वा को भाग हुन संगठन संग शीर्ष गोप्य राष्ट्रिय महत्त्व छ । यो केटा, दु:»मानिस», एक हुनेछ जो भन्छ आफ्नो बुबा ‘सर’ (‘मामा’), र यसरी रहने सदाको लागि को सूची मा मान्छे गर्ने परेशान आफ्नो आमाबाबुले. सम्झौता टिप: जोगिन आफ्नो उपस्थिति छ । हुन मा एक खोज छ । मामला मा तपाईं उम्कन सक्दैन, बस मुस्कान र इशारा रूपमा साथ तिनीहरूले मनोरंजन तपाईं आफ्नो अतिशयोक्ति छ । जब तपाईं पर्याप्त थियो, प्रयोग सुन्तला आफ्नो आमा पैक मा को एक हतियार रूपमा विकल्प र चलान.
यो मान्छे आफ्नो जाओ — गर्न व्यक्ति — उहाँले सुन्नुहुन्छ आफ्नो कथाहरू, समर्थन आफ्नो निर्णय, र राख्छ कि शारीरिक खाली शालीनता को हरेक केटी इच्छा छ । उहाँले आफ्नो सबै भन्दा राम्रो पाल र तपाईं मा गणना उहाँलाई लागि सबै सम्झना नोट र मजा ‘बाहिर झुन्डिएको’. बस एक सानो समस्या उहाँले क्रशिंग मा तपाईं यो सबै जबकि । कुनै कुरा कसरी स्पष्ट आफ्नो सङ्केत हो भनेर उहाँलाई तपाईं को दुई छैनन् आदम र हव्वालाई, आफ्नो हृदय स्वीकार गर्न इन्कार । दोषी पटक को सबै भन्दा लागि भएको उहाँलाई नेतृत्व, र पनि तपाईं आश्चर्य बनािन्छ कसरी कायम गर्न नै सौहार्द बिना जटिल नतिजा । सम्झौता टिप: बस्न मिठाई केटा तल र यो बाहिर कुरा. उहाँलाई तल गरौं र बिस्तारै उहाँलाई बताउन कसरी महत्त्वपूर्ण उहाँले छ रूपमा तपाईं एक मित्र छ । कसैको भावना छैन भने तपाईं यो जस्तै महसुस. एकै समयमा, छैन नेतृत्व मा कुनै जानिजानि वा फाइदा लिन उहाँलाई । मामला मा कुराहरू अझै पनि छैन सरल बनाउन, यो राम्रो छ, फिर्ता कदम र को जाने गरौं मित्रता तपाईं चोट अन्त. यो केटा छ लागि आधिकारिक गाइड सारा वर्ग मा केहि गर्न सम्बन्धित लागूपदार्थको । कुरा लागूपदार्थको जस्तै प्रेम यो वास्तविक सम्झौता छ यहाँ । उहाँले एक आपूर्ति को सबै»मेल»मा शहर, र कुनै एक ठीक थाह कसरी छ । उहाँले सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ द्वारा आफ्नो आँखा र लामो, लथालिड़ग कपाल. सबै उहाँले बारेमा कुरा गर्न सक्छौं छ लागूपदार्थको छ, जो सधैं मजा छैन सुन्न. यो एक दल हरेक सप्ताह र शाब्दिक जीवन ‘उच्च’ जीवन । सम्झौता सुझाव: केही जाँच भिडियो इन्टरनेटमा मा बनाउन कसरी रचनात्मक भनेर भन्न,»म छैन के लागूपदार्थको», छ । यो पकड माथि हरेक समय उहाँले आउँछ मीटर भित्र आफ्नो शारीरिक आभा. मा आफ्नो कम्पनी को लागि कुनै कारण छ । लागूपदार्थको गरे कहिल्यै राम्रो गर्न, कसैलाई पनि माइकल ज्याक्सन.
यो केटा पनि स्मार्ट छ लागि आफ्नै राम्रो । विश्वास छ कि, आफ्नो प्रयोग को (अवान्छित, अप्रिय) व्यंग्य हुनेछ उन्मूलन तेस्रो — विश्व मुद्दाहरू । भन्न अनावश्यक, उहाँले जीवन मा आफ्नै संसार को सुन्दर व्यर्थ र आफ्नो धेरै प्रतिभा समावेश रही मा मानिसहरूको नसाहरू. सबैको जीवन हो, आफ्नो व्यापार र उहाँले एक राय, सामान्यतया एक, अरूलाई मा’ विषयमा । हुनुको अर्थ वा तपाईं मा सार्वजनिक संग आफ्नो असाधारण ज्ञान को तपाईंको सबैभन्दा असजिलोपना क्षण । उहाँले आशाहरू गर्न स्वीकार (आधिकारिक) को राजाको रूपमा संसारको एक दिन. सम्झौता टिप: अज्ञानता, परम, र परम छ.
के तपाईं खोज्नै पर्छ
के छैन प्रयास गर्न संलग्न उहाँलाई बुद्धिमत्ता एक युद्धमा मा, नभएसम्म आफ्नो शौक छ । स्वीकार कि आफ्नो अस्तित्व एक उल्टाउन गल्ती र लागि प्रतीक्षा को मीठो बदला समय छ । खोज मा उहाँलाई केही वर्ष तल लाइन गर्न कसरी राम्रो देख्न, उहाँले गरिरहेको छ । संभावना उहाँले रहनेछ एकल, सबै आफ्नो जीवन गर्न किनभने जो महिला हिम्मत थियो. यो केटा विश्वास उहाँले एक उपहार छ. आफ्नो प्राकृतिक मा, उहाँले फेला गरिनेछ वरिपरि कम्तीमा एक केटी छैन भने एक समूह तिनीहरूलाई छ । उहाँले एक सभ्य — देख सँगी गर्ने भन्दा आफ्नो अनुमान आकर्षण छ । दुर्भाग्यवश, बालिका गिर गर्न को लागि यो र अन्त माथि विश्वास उहाँले आफ्नो. मीठो, राम्रो, विचारशील, र वफादार छ । त्यो सबै छ, तर उहाँले छ यो हरेक केटी उहाँले भेट्छन्. यो गरिब प्रेम मा खसेको छ त, धेरै पटक आफ्नो कामदेव चलिरहेको छ को बाहिर तीर छ । सम्झौता टिप: शिकार गिर छैन आफ्नो लगनशीलता छ । रमाइलो ध्यान जब यो आफ्नो बाटो आउँछ, संलग्न कुनै पनि भावनाहरू गर्न यो व्यक्तित्व । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, छैन मा संलग्न कुनै पनि कुराकानी संग यो यार पछि हुँ । गर्न अन्धकारमा पक्ष । धन्यवाद । यो केटा छ अभिव्यक्ति मा आफ्नो अनुहार र तपाईं हेर्न हुनेछ संग एक गर्न असम्भव छ भनेर बुझ्न. छ भनेर इच्छा लागि बदला मा आफ्नो आँखा । कसले थाह छ । उहाँले हुनेछ अधिक भन्दा तपाईं छक्क संग आफ्नो आकस्मिक शब्द र एकदम को कि तपाईं इच्छा गर्न उहाँलाई कुरा वा छैन । उहाँले प्रकट हुनेछ, कहीं, कतै बाहिर, र छ एकदम खतरनाक छन् गर्नेहरूलाई हृदयको बेहोश छ । खबरदार छ । सम्झौता टिप: जोगिन केटा हेरिसकेकी छ्यौ रूपमा चाँडै तपाईं यो याद छ । के छैन प्रयास गर्न उहाँलाई, तल किनभने तपाईं जीत छैन. स्नायु हाँसो र बहाना को»म»काम प्राप्त हुन सक्छ, तपाईं बाहिर अवस्था छ । यात्रा को समूह मा तीन वा चार । आनन्द सुरक्षा ।
← च्याट अनलाइन
महिला विवाह गर्ने एक घोडा: घनिष्ठ फोटो को बीच प्रेम एक महिला र एक घोडा →